Hatsaran'ny avy any Brezila: ny fifantenana ny sary
Hatsaran’ny avy any Brezila: ny fifantenana ny sary
Brezila − ny firenena carnivals, tsy misy tora-pasika sy ny olona mahafinaritra. Mafana ny hatsaran-tarehy ny vehivavy Breziliana, dia nidera manerana izao tontolo izao, fa ny olona dia tsy mba ambany noho ny mpiray tanindrazana. Manoro hevitra anareo aho mba hijery tsara tarehy mampino lahy izay efa fahombiazana amin’ny ny modely ny raharaham-barotra. Mampanantena aho, izany dia ampy dia hanome fahafinaretana. Ao Marlon mivoaka marina mipoaka mifangaro ra: Breziliana, portogey, Indiana sy ny Japoney. Eo amin’ny enina ambin’ny folo taona izy dia efa nametraka ny tenany eo amin’ny orinasa modeling ary efa niara-niasa tamin’ny maro ny olo-malaza endrika, toy ny I. Marlon ihany koa niseho teo amin’ny fonony ny glossy gazety, ary nandray anjara tamin’ny dokam-barotra ny fampielezan-kevitra, I. Ankoatra ny raharaham-barotra ny modely Marlon manana ny lomano. Fantatra amin’ny maha-endriky ny marika lingerie (x), ary ny manana ihany koa ny niseho tao amin’ny dokam-barotra ny fampielezan-kevitra, ary ny hafa. Naniry modely sampan-draharaha nanintona ny olona rehetra ny tevika maso. Fahombiazana be Lucas mbola tsy tonga, nefa, dia tsy isalasalana fa izany rehetra izany dia hita. Francisco dia ny Breziliana modely amin’ny zavatra fakany. Ny asa nanomboka tany, rehefa nahazo ny modely fifaninanana ao Sao Paulo sy nanao sonia ny fifanekena. Lehilahy nandray anjara tamin’ny fanentanana, ary mampiseho, I. ny Rahalahy kambana Mario sy Marcos Patriota efa nifidy asa iray. Ry zalahy ireo efa tsy miasa irery. Miara-dia esorina na dia feno fihantsiana sy sary manaitaitra ny sakeliny. Indraindray ny fitiavana tsy toy ny pirahalahiana. Ireo zavatra tsara efa eo ambany ny family tsy misy tsy feno fihantsiana mpaka sary Terry Richardson. Mpilalao baolina kitra teo aloha sy ny ankehitriny, ny modely − Rodriguez dia niara-niasa toy ny marika maha-I. Maitso-maso brunette miaraka amin’ny tsara tarehy ny vatana, izay mandravaka ny tombokavatsa. Raphael nandravaka ny rakotra fanaovam-panavotana izany lamaody gazety, ary hita ao amin’ny catwalks any Milan, Paris sy new York. Bruno, teraka tao amin’ny olon-tsotra ny fianakaviana kely fidiram-bola. Efa avy ny fahazazana miasa mba hanampy ny fianakaviany. Rehefa ny sipa-modely dia nitarika azy ho any amin’ny sampan-draharaha izay Bruno avy hatrany nanolotra fifanarahana. Amin’izao fotoana izao Santo dia fantatra ao amin’ny tontolon’ny lamaody: izy dia nandray anjara tamin’ny dokam-barotra ny fampielezan-kevitra, ary ny hafa. Asa Ecuador nanomboka ny fifaninanana ao amin’ny toerana nahaterahany, any Brezila. Ankehitriny izy dia iray amin’ireo mahomby indrindra modely eo amin’izao tontolo izao ny catwalks.
ihany koa Izy ny hiatrika ny marika ao −. Ny Brunet trano ao amin’ny Ala amin’ny manga ny maso no naharesy tsy ny modeling fa koa tena am-po ny Madonna. Ny modely skoto dia nasaina -taona dia zazalahy ny mandinika ny sampan-draharaha efa-polo. Vokatr’izany, ny trano dia naka sary ny fanangonana ny olona ny atin’akanjo, nivoaka tao amin’ny gazety-boky fonony, alemana ary italiana fanontana sy lasa ny tavany.
Ny trano dia tsy modely fa ny DJ
Diego nandritra ny fotoana ela tao amin’ny orinasa modeling. Efa voatifitra ho toy ny marika toy ny, ary koa ny niseho eo amin’ny fonon’ity italiana. Misintona de Satana Santo niondrana an-modeling tao anatin’ny taona maro. Amin’izao fotoana izany dia mamirapiratra ao amin’ny tele, ary starred eo amin’ny dokam-barotra fampielezan-kevitra. Fa ny zavatra dia ny anjely any an-danitra. Mbola hatsaran-tarehy ity dia tsy misy jiro ny amin’ny izao tontolo izao ny fampirantiana sy ny mangatsiatsiaka ny dokam-barotra fampielezan-kevitra, fa tsy miraharaha izany dia zavatra tsy hainy. Ankoatra ny fandraisana anjara amin’ny fitarihana ny lamaody dia mampiseho, Alexander ihany koa ny miseho eo amin’ny fonony ny glossy gazetiboky, I. Lucas vao nanomboka ny asa, fa lasa ny mponina ao an-mitarika modeling ny sampan-draharaha. Ka izany rehetra izany dia manomboka. Dia niondrana an-modeling tao anatin’ny taona maro. Nandritra ny fotoana voalohany Pablo naka ny fiaingana dia ao ny tompon-tany Brezila, ary izy no hita farany dia mampiseho. Lucas no misolo tena an’i Brezila amin’ny fifaninanana ao amin’ny Repoblika entim-bahoakan’i Shina ary lasa mpandresy. Tsy mahagaga raha − izay no iray ny tsiky. Ao amin’ny vohikala ity dia mampiasa ny antontan-taratasy. Mitohy ny fampiasana ny tranonkala, ianao manaiky ny fampiasana ny antontan-taratasy
← Virt online Dating maimaim-poana sy tsy misy fisoratana anarana
Trandrahana Brezila →